Top 10 Book Comic Book Super Villains Yonke ixesha
Wonke umntu uyamthanda umntu omuhle. Ngaphandle kobuhlali obuninzi, ngaba kukho naziphi na izinto eziphezulu ? Nabani na onokuba yinto embi, kodwa ukuba uthathwa njengomntu onobuqhetseba, kufuneka ube neenkani, unamandla kwaye ngezinye izihlandlo. Jonga uluhlu lweendawo eziphezulu eziphezulu zexesha lonke.
Xa iGalactus-i-world-eating ebonisa, iba yinkinga yomntu wonke. Ngendlela yokubulala abantu be-cosmic-powered power-side, i-Galactus yinto yokulwa. Ukuba awuyiyo, umphumo awukho ukulawula kwehlabathi, kodwa ukutshabalaliswa kwehlabathi. I-Galact isonakalise ihlabathi elingenakubalwa kwaye labulala amabhiliyoni ezidalwa. Ukulamba kwakhe akuyi kuphinda kuphele kwaye ngoko, ukutshabalalisa kwakhe akuyi kubakho.
UDaniel Boczarski / Getty Izithombe
UGenius, owayengumongameli, umntu olwaphulo-mthetho, oomashishini, intlalo. Inombolo ye-Superman yomntu oyilungileyo isondele kufuphi noluhlu lwamaxesha amnandi kakhulu. Nangona iLex ingenawo amandla omlingo, amandla amakhulu, okanye nayiphi na enye yezinto ezenza i-super-villain egciniweyo, yena ngaphezu kokwenza oku kunye neengqondo zakhe ezigqithiseleyo kunye nokunyaniseka. Musa ukungena kwicala elibi. Ukuba ukwenza, unokubheka ukuba awuyi kuhlala ixesha elide. Kaninzi "
Murray Close / Getty Izithombe
I-Yin kuNjingalwazi X uYang, i-Magneto ayiyi kuphumla ade umntu athathe indawo yayo efanelekileyo, emva kohlobo oluphezulu lomhlaba, iziqu. U-Magneto uye waba yinkokheli yeqela leentshukumo ezinomsebenzi wokuphela kwehlabathi ukulawula i-mutants kwaye abantu basala emva kwendlela yokuziphendukela kwemvelo. Ukongeza kwinto yokuba ngokuqinisekileyo enye yezona zinto zininzi, ukuba azikho izinto ezinamandla kunazo zonke kwiNdalo yendalo, iMagneto ingomnye wabantu abakhulu, abathuthunyiswayo bonke ixesha.
benoitb / Getty Izithombe
I-Joker iyadala. Mhlawumbi oko kukhangeleka ngale mpawu. Ubuhlungu, ukuziphatha, ukucinga okunengqiqo kunye nezinye izinto eziqhelekileyo ziphuma ngefestile xa umntu ecinga ngeJoker. Hlanganisa ubunqunu bakhe kunye nekhono lakhe lokumelana neekhemikhali ezinetyhefu, kwaye unemibala ye-madman engalindelekanga engabangela abo bajikelezayo. Kaninzi "
UWilliam Tung wase-USA (CC BY-SA 2.0) / Wikimedia Commons
Umlawuli weLatveria ungenye yeentshaba ezinkulu zeentengiso. Ingqiqo yakhe kunye nenkosi yobugcisa obuyimfihlo yenza le ndoda ibe yenye yezinto ezinamandla kunazo zonke kwiNdalo yendalo . Ukomeleza kwakhe ukubusa kwehlabathi kuphethwe yindlala yakhe ukubona uRed Richards efile kwaye ehlazekile. I-Victor Von Doom ngokwenene awufuni ukuzithoba.
CTRPhotos / Getty Izithombe
Ukukhwabanisa, okunamandla, kunye nobuthakathaka bonke beza engqondweni nomnye ucinga ngeVenom. I-Venom ayiyena umntu nge-SE, kunoko iingubo ngumntu ohlala kuyo kule ngxaki. Ingubo yeVenom yindalo yesifo esixhomekeke kwimpumelelo, inika amandla amakhulu, isivinini, ubuchule, kunye namagunya okubhula ngewebhu. Kuzo zonke iimeko, iinjongo eziphambili zeendleko zifanele zithathe phantsi i-Spider-Man. Ngethamsanqa kuthi, oko akukwenzeka okwamanje.
Ifoto esuka ku-Amazon
Darkseid inomgomo omnye, ukulawula yonke indawo. Akunomsebenzi omncinci, kodwa i-Darkseid idinga kuphela ukufumana i- "Anti-Life Equation" kwaye uya kuphumelela. Ukomelezwa kwakhe kwamandla kuhambelana kuphela nobuchule bakhe obukhulu. Unamandla amakhulu kunye nekhawulezi, kwaye unayo i-Omega Beam enegunya elininzi elinamandla. Ukuba i-Darkseid iyakwazi ukufumana le ngqungquthela, ekholelwa ukuba ivalwe ngaphakathi kwiingcamango zomhlaba ngaphezu kobukho bethu buya kuba luyiko lokwenene.
URa's al Ghul uye waba ngumfanekiso weBatman obalaseleyo. Injongo yakhe kukuhlambulula umhlaba nokuwubuyisela kwi-Eden-like state. Ingxaki kukuba, ininzi yoluntu kufuneka ife kwinkqubo. URa wahlala ixesha elide kakhulu, ehlaba ukufa kunye nokusebenzisa uLazaro Pit. Ubulumko bakhe obuyingqiqo kunye nobuchule kwezobugcisa bokulwa kunye nekrele, uRa ungumdlali omelekanga, ufanelwe ukuba ngumxholo we-villain.
I-FilmMagic / Getty Izithombe
I-Green Goblin yayiyinye yegalari yesiganeko se-Spider-Man iminyaka emininzi. Uxanduva lokufa kukaGwen Stacy, uye waba yi- bane ye-Spider-Man kaninzi. I-Goblin inegunya elinamandla kunye nobuchule obukhulu, kunye neenkcukacha ezininzi ezibulalayo. Abantu abaninzi baye bathabatha isambatho se-Green Goblin, kodwa sele beza kuvela kwi-Green Goblin yasekuqaleni, uNorman Osborn uphila kwaye, elindele ukubetha kwi-Spider-Man kunye nabalingani bakhe.
UWilliam Tung / (CC BY-SA 2.0) / Wikimedia Commons
In Sabah Nur uzibona ngokwakhe njengengqungquthela yokuqala kwaye ngoko ke inkokheli kunye nomlawuli wayo. I-Apocalypse yenye yezinto ezinamandla kakhulu zehlabathi, ezinokukwazi ukutshintsha isakhiwo sayo. Kwakhona ubonakala engenakufa. Kwixesha elingaphezulu kwexesha elilodwa, i-Apocalypse iye yawulawula umhlaba. Uqhubela phambili kule njongo namhlanje, ukhetha ixesha elifanelekileyo lokuvusa nokuzityhila.
Iincwadi ezili-10 ezigqwesileyo ezidumileyo
Indlela Yokuba I-Comic Book Penciller
Mfutshane neMeko yeMint
Ixesha elizayo lokuGcina - iMint
Top Comic Book Archenemies
Yimvelaphi yeLizwi elithi 'Mulligan' eGoli?
I-Mercury Retrograde kwi-Birth Chart
Iingcaphuno zikaMark Twain kwiNkolo
4 Izixhobo zokunceda abaFundi bezeNzululwazi ukuba bafumane i-Scholarships
I-Merovingian iFrancis Queens
Amalungelo afana namaLungelo akhethekileyo
Inkcazo yokuHlulelwa kweDehydration Reaction
Utshintshi lweeMitha zoMbane kwiSombululo esinamandla
Indlela yokubala i-Score yakho yeB Bowling Score
Kuthetha ntoni uMarko Twain?
I-Dinosaurs nezilwanyana zasePennsylvania
Kutheni i-Ballet Terms ivela kwiilwimi zesiFrentshi
Ngaba Uyazi ukuba ngubani owamngcwaba i-Wheelbarrow?
UMongameli kunye noPhicotho
Iinkonzo kunye neNgcono yeSifom
Imfazwe Yehlabathi II: Curtiss P-40 Warhawk
Iipayili ezilahlayo: I-Painter ye-Acrylic iveza iimfihlo zakhe zokugquma
Ukudala iiHolesi ezimnyama
Ulimi loLwimi lwaseFrance: L'Amour et l'Amitié
Romulus - Mythology yamaRoma Ngomhla wokuQala noKokuqala waseRoma
Ii-Wills zase-Australia, ii-Estates, kunye neeRebate Records